Warsaxaafadeed Dallada SSE oo Soo Saartay Qaaladhaanta Gurmadka Loo Fidinayo Abaaraha Somaliland |
Warsaxaafadeed Dallada SSE oo Soo Saartay Qaaladhaanta Gurmadka Loo Fidinayo Abaaraha Somaliland
Dallada Somaliland Societies in Europe (SSE) oo kulmisa jaalliyadaha Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan si kooban oo dareen ku jiro u tilmaamaysaa sida ay mahuraan u tahay in si wadajir ah oo mideysan looga qayb qaato gurmadka iyo gargaarka dadka ay saamaysay ama ay ku habsadeen abaaraha Somaliland gaar ahaana kuwa dhinaca bariga.
Dareen la wadaagid
Dallada SSE waxay ogsoontahay xannuunka iyo dhibaatada ay leedahay marka aad aragto abaarta baahsan ee ku habsatay Somaliland gaar ahaana Gobbolada Bariga oo ah dhul aad u balaadhan. Waa xaalad aan la sifeyn karin oo ah biyo iyo baad la’aan. Waxaa tiro iyo tarab tarab u le’anaya xoolihii ay dadka lahaayeen ama ku noolaayeen. Waxa khatar iyo dhimasho qarka u saaran kumanaan qof haddii aan la helin gurmadka iyo taageerada loo baahanyahay. Waynu ognahay xoolahan ku le’day abaarta inay yihiin kuwii nolosha laf-dhabarka u ahaa dalka iyo dadka reer Somaliland. Waa xaalad damqashadeeda leh isla markaana ka soo kabashadeedu ay wakhti qaadanayso. Ugu horreyn Ilaahay oo kaliya ayaa wax kaafiya oo aynu ka baryaynaa inuu ummadiisa u keeno roobka iyo biyaha ay baahida u qabaan.
Dallada SSE waxay halkan ka guubaabinaysaa dhammaan qaybaha Bulshada Somaliland oo aan dedaal ku yareyn. Warbaahinta Somaliland oo leh TV(yada), Idaacada Qaranka, Joornaalada iyo dhammaan website(yada) Somaliland ayaanu halkan uga muujinaynaa dedaalka ay u galeen sidii ay u xoojin lahaayeen wacyigelinta iyo ka warqabka aafada iyo dhibaatada ka dhalatay abaaraha inagu habsadey.
Xukuumadda, Golayaasha Qaranka, Xisbiyadda Qaranka, Ururada Bulshada Rayidka, Culumada, Ganacsatada , Aqoonyahanka iyo Waxgaradka ummada Somaliland ayaanu si gaara uga codsanaynaa in loo midoobo wax-ka-qabashada iyo gurmadka abaaraha. Baaqa ka soo yeedhay xukuumadda oo u horreeyo Madaxweynuhu run ahaantii dhiirigelin iyo dareen taabasho ayuu ummada guud ahaan u noqdey.Dedaalo iyo dhaqdhaqaaqyo fiican ayaa socda oo u baahan in la joogteeyo ama la xoojiyo maadaama aan la ogeyn wakhtiga aynu helayno roob ama biyo abaarta inaga saara. Ilaahay ayaynu ka baryaynaa inuu nimcadiisa inagu galado (Aamiin).
Haddii aynu nahay qurbo jooga Somaliland ee Yurub iyo kuwa qaaradaha kaleba marwalba waxaynu heegan iyo kaalin mahuraan ah kaga jirnaa ka qayb qaadashada taageerada iyo gurmadka waxtarka u ah dalka iyo dadka reer Somaliland.Wararka iyo muuqaalada inaga soo gaadhaya Gobbolada abaaruhu ku habsadeen waa qaar naxdin iyo damqasho ku leh nafaheena. Waa dhib toos inoo taabanaya oo leh dareen taabasho xooggan.
Dhicisku inta birta loo soo siduu bakhtiyaa. Waxaynu u baahanahay in si degdeg ah aynu u hawlgalno oo aan la yareysan kaalmada aynu aafada qaran ka geysan karno. Waa arrin u baahan inaynu la wadaagno qoysaskeena iyo ummadkeena. Waa arrin loo baahanyahay in dhammaan qaybaha bulshada ee qurbo joogu ay ka hawlgalaan haddii ay tahay rag, dumar iyo dhallinyaraba. Waa arrin aynu u baahanahay inaynu la wadaagno bulshooyinka ay la noolnahay si loo helo cid inagla qayb qaaadata. Waxa haboon ama taladu tahay in kolba wixii la helo degdeg la isku dhaafiyo iyada oo lagu hagaajinayo cida iyo goobta ugu haboon ee sida ugu dhakhsaha badan u gaadhsiinaysa halka ay baahida ugu badan ka jirto.
Ka qayb qaadashada in wax laga qabto oo gurmad loo fidiyo dadka abaartu saamaysay waa arrin banii’aadnimo. Waa arrin waajib inagu ah oo aan sinaba indhaha looga qarsan kareyn. Waxaynu baahanahay inaynu abaabul adag galno oo ku bixino wakhti iyo hawl leh hufnaanteeda iyo kartideeda. Cidna ha u daneyn ee ogow haddii aynu xannuunka la qaybsano walaalaheena baahan inay tahay wax taariikhdana inoo galaya isla markaana ah ajar iyo shaqo aad u sii hormarsatay maalin aad adigu baahi u qabto oo ah maalinta aakhiro.
Waxaynu isku ognahay in aan la dhayalsan baaqan gurmadka ah oo ah wax inagu waajib ah inaynu si guud iyo si gaaraba uga qayb qaadano.